အာဠာ၀ကဘီလူးကေမးၿပီး ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားခဲ့ေသာ (အာဠာ၀ကသုတၱန္) – WunYan
အာဠာ၀ကဘီလူးကေမးၿပီး ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားခဲ့ေသာ (အာဠာ၀ကသုတၱန္)
(၁) ေလာကမွာ အေကာင္းဆံုး ဥစၥာက ဘာလဲ။
အေျဖ=သဒၶါသည္အေကာင္းဆံုး ဥစၥာ။ (သဒၶိဓ ၀ိတၱံပူရိသႆ ေသဌံ)
(၂) ေလာကမွာ ဘာလုပ္ရင္ခ်မ္းသာမွာလဲ။
အေျဖ=ဓမၼကိုက်င့္သံုးရင္ ခ်မ္းသာမယ္။ (ဓေမၼာ သုစိေဏၰာ သုခမာ၀ဟတိ)
(၃) ေလာကမွာ အေကာင္းဆံုးအရသာက ဘာလဲ။
အေျဖ=အေကာင္းဆံုး အရသာဟာ သစၥာ။ (သစၥံ သာဓုတရံ ရသာနံ)
(၄) ေလာကမွာ အေကာင္းဆံုးေသာ အသက္ရွင္နည္းက ဘာလဲ။
အေျဖ=အသိပညာနဲ႔အသက္ရွင္တာ အသက္ေမြးတာ အေကာင္းဆံုး။ (ပညာဇီ၀ိံဇီ၀ိတ မာဟု ေသဌံ)
(၅) အခက္အခဲကို ဘာနဲ့ ျဖတ္ေက်ာ္ရမွာလဲ။
အေျဖ=သဒၶါနဲ့ ျဖတ္ေက်ာ္ရမယ္။ (သဒၶါယ တရဟိ ၾသဃံ)
(၆) က်ယ္ေျပာေသာဘ၀ၾကီးကို ဘာနဲ့ျဖတ္ကူးရမွာလဲ။
အေျဖ=သတိနဲ့ ျဖတ္ကူးရမယ္။ (အပၸမာေဒန အဏၰ၀ံ)
(၇) ဆင္းရဲဒုကၡကို ဘာနဲ့ဖယ္ရွားမွာလဲ။
အေျဖ=ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ဝီရိယျဖင့္ဖယ္ရွားနိုင္မယ္။ (၀ီရိေယန ဒုကၡမေစၥတိ)
(၈) စိတ္ျဖဴစင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။
အေျဖ=ပညာျဖင့္သာ ေဆးေၾကာရမယ္။ (ပညာယ ပရိသုဇၽြတိ)
(၉) ပညာကို ဘယ္လိုရေအာင္ယူရမွာလဲ။
အေျဖ=နားလည္ခ်င္တဲ့စိတ္ နားေထာင္ခ်င္တဲ့စိတ္ မွတ္သားခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိရင္ ပညာရပါတယ္။ (သုႆုသာ လဘေတ ပညံ)
(၁၀) ဥစၥာကို ဘယ္လို ရွာမွာလဲ။
အေျဖ=လံုလ၀ီရိယရွိျပီး တက္တက္ၾကြၾကြ ၾကိဳးစား အားထုတ္ရမယ္။ (ပတိရူပ ကာရီ ဓုရ၀ါ၊ ဥဌာတာ ၀ိႏၵေတ ဓနံ)
(၁၁) အေက်ာ္အေစာရွိရန္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။
အေျဖ=သစၥာရွိ ဂတိတည္ မွန္ကန္ရန္လိုတယ္။ (သေစၥန ကိတိၱံပေပၸါတိ)
(၁၂) မိတ္ေဆြေတြ ရခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။
အေျဖ=ေပးကမ္းပါ။ (ဒဒံ မိတၱနိ ဂႏၳတိ)
(၁၃) ဘယ္တရားေတြက်င့္သံုးမွ ေနာက္ဘ၀အေရး စိတ္ေအးရမွာလဲ။
အေျဖ=အမွန္တရား၊ အသိပညာ၊ လံု႔လ၀ီရိယ၊ စြန့္ႀကဲေပးကမ္းမႈ၊ ရွိရမယ္။ (သစၥံ ဒေမၼာ ဓိတိ စာေဂါ)
(၁၃၇၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တပို့တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ တာေမြျမို ့နယ္ သူေဌးလမ္းမိသားစု ဓမၼသဘင္ အခန္းအနား၀ယ္ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေသာ ဘ၀အေရးစိတ္ေအးရေလေအာင္ တရားေတာ္မွ ေကာက္နုတ္ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။)
အာဠာဝက ဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးထဲတြင္ တေထာင့္တေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အာဠာဝက နတ္ဘီလူးအား ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ သည္းခံျခင္း၊ ေမတၱာဓာတ္ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိျပီးျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။
အာဠာဝကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျခိမ္းေျမာက္သမႈျပဳ၍ အႏိုင္ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ဒူးေထာက္၍ အရႈံးေပးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ အရႈံးမေပးလိုေသာ အာဠာဝကဘီလူးသည္ ဘုရားရွင္အား ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဠာဝက-၏ ေမးခြန္းႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား (သံယုတ္ပါဠိေတာ္ ယကၡသံယုတ္၊ အာဠာဝကသုတ္)၌ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ဤေလာက၌ ယံုၾကည္မႈ တည္းဟူေသာ သဒၶါသည္သာလွ်င္ ေယာက်္ားျမတ္ဥစၥာ ျဖစ္သည္။
အရသာတို႔တြင္ အဘယ္သို႔ေသာ အရသာသည္ အခ်ိဳျမိန္ဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။?
အၾကင္ အိမ္ေထာင္မႈကို ရွာမီွးေလ့ရွိေသာ ယံုၾကည္မႈရွိသူအား မွန္ကန္မႈဟူေသာ သစၥာ၊ ပညာဟူေသာ ဓမၼ၊ အားထုတ္မႈဟူေသာ ဝီရိယ၊ စြန္႔ၾကဲမႈတည္းဟူေသာ စာဂ၊ ဤတရား ေလးပါးရွိေသာ သူသည္သာလွ်င္ တမလြန္ဘဝသို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ မစိုးရိမ္ရေခ်။
အာဠာဝကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျဖဆိုေတာ္မူျခင္းအေပၚ ေက်နပ္အားရျခင္းႏွင့္အတူ ၾကည္ႏူးပီတိပါ ျဖစ္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အာဠာဝကသည္ သာဓုသံုးႀကိမ္ ေခၚဆိုျပီးေနာက္ ဘုရားရွင္အား ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္ လက္အုပ္ခ်ီကန္ေတာ့လိုက္ေလေတာ့သတည္း။
Credit : မူၾကိဳဆရာ
အာဠာဝကဘီလူးကမေးပြီး ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဖြေကြားခဲ့သော (အာဠာဝကသုတ္တန်)
(၁) လောကမှာ အကောင်းဆုံး ဥစ္စာက ဘာလဲ။
အဖြေ=သဒ္ဓါသည်အကောင်းဆုံး ဥစ္စာ။ (သဒ္ဓိဓ ၀ိတ္တံပူရိသဿ သေဌံ)
(၂) လောကမှာ ဘာလုပ်ရင်ချမ်းသာမှာလဲ။
အဖြေ=ဓမ္မကိုကျင့်သုံးရင် ချမ်းသာမယ်။ (ဓမ္မော သုစိဏ္ဏော သုခမာဝဟတိ)
(၃) လောကမှာ အကောင်းဆုံးအရသာက ဘာလဲ။
အဖြေ=အကောင်းဆုံး အရသာဟာ သစ္စာ။ (သစ္စံ သာဓုတရံ ရသာနံ)
(၄) လောကမှာ အကောင်းဆုံးသော အသက်ရှင်နည်းက ဘာလဲ။
အဖြေ=အသိပညာနဲ့အသက်ရှင်တာ အသက်မွေးတာ အကောင်းဆုံး။ (ပညာဇီဝိံဇီဝိတ မာဟု သေဌံ)
(၅) အခက်အခဲကို ဘာနဲ့ ဖြတ်ကျော်ရမှာလဲ။
အဖြေ=သဒ္ဓါနဲ့ ဖြတ်ကျော်ရမယ်။ (သဒ္ဓါယ တရဟိ သြဃံ)
(၆) ကျယ်ပြောသောဘဝကြီးကို ဘာနဲ့ဖြတ်ကူးရမှာလဲ။
အဖြေ=သတိနဲ့ ဖြတ်ကူးရမယ်။ (အပ္ပမာဒေန အဏ္ဏဝံ)
(၇) ဆင်းရဲဒုက္ခကို ဘာနဲ့ဖယ်ရှားမှာလဲ။
အဖြေ=ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ဝီရိယဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်မယ်။ (ဝီရိယေန ဒုက္ခမစ္စေတိ)
(၈) စိတ်ဖြူစင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။
အဖြေ=ပညာဖြင့်သာ ဆေးကြောရမယ်။ (ပညာယ ပရိသုဇျွတိ)
(၉) ပညာကို ဘယ်လိုရအောင်ယူရမှာလဲ။
အဖြေ=နားလည်ချင်တဲ့စိတ် နားထောင်ချင်တဲ့စိတ် မှတ်သားချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိရင် ပညာရပါတယ်။ (သုဿုသာ လဘတေ ပညံ)
(၁၀) ဥစ္စာကို ဘယ်လို ရှာမှာလဲ။
အဖြေ=လုံလဝီရိယရှိပြီး တက်တက်ကြွကြွ ကြိုးစား အားထုတ်ရမယ်။ (ပတိရူပ ကာရီ ဓုရဝါ၊ ဥဌာတာ ၀ိန္ဒတေ ဓနံ)
(၁၁) အကျော်အစောရှိရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။
အဖြေ=သစ္စာရှိ ဂတိတည် မှန်ကန်ရန်လိုတယ်။ (သစ္စေန ကိတ္တိံပပ္ပေါတိ)
(၁၂) မိတ်ဆွေတွေ ရချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။
အဖြေ=ပေးကမ်းပါ။ (ဒဒံ မိတ္တနိ ဂန္ထတိ)
(၁၃) ဘယ်တရားတွေကျင့်သုံးမှ နောက်ဘဝအရေး စိတ်အေးရမှာလဲ။
အဖြေ=အမှန်တရား၊ အသိပညာ၊ လုံ့လဝီရိယ၊ စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှု၊ ရှိရမယ်။ (သစ္စံ ဒမ္မော ဓိတိ စာဂေါ)
(၁၃၇၀ ပြည့်နှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၄ ရက် တာမွေမြို ့နယ် သူဌေးလမ်းမိသားစု ဓမ္မသဘင် အခန်းအနားဝယ် ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားသော ဘဝအရေးစိတ်အေးရလေအောင် တရားတော်မှ ကောက်နုတ်ရေးသား ပူဇော်ပါသည်။)
အာဠာဝက ဘီလူးသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးထဲတွင် တထောင့်တနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အာဠာဝက နတ်ဘီလူးအား မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ သည်းခံခြင်း၊ မေတ္တာဓာတ်ဖြင့် လွှမ်းခြုံ အောင်မြင်တော်မူခဲ့သည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။
အာဠာဝကဘီလူးသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ခြိမ်းမြောက်သမှုပြု၍ အနိုင်ရယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အချည်းနှီးသာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဒူးထောက်၍ အရှုံးပေးခဲ့ရသည်။ သို့သော် လွယ်လွယ်နှင့် အရှုံးမပေးလိုသော အာဠာဝကဘီလူးသည် ဘုရားရှင်အား နောက်ဆုံး အနေဖြင့် မေးခွန်းများ ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုမေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အာဠာဝက-၏ မေးခွန်းနှင့် ဘုရားရှင်၏ ပြန်လည် ဖြေကြားချက်များအား (သံယုတ်ပါဠိတော် ယက္ခသံယုတ်၊ အာဠာဝကသုတ်)၌ ဟောကြားဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အာဠာဝကဘီလူး အနေဖြင့် မေးခွန်းများအား ခဲခဲယဉ်းယဉ်း မေးခဲ့ရသော်လည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်က လွယ်လွယ်ကူကူပင် ပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်။
အဘယ်ဥစ္စာသည် ဤလောက၌ ယောကျ်ားအား မြတ်သော ဥစ္စာ ဖြစ်ပါသနည်း။?
ဤလောက၌ ယုံကြည်မှု တည်းဟူသော သဒ္ဓါသည်သာလျှင် ယောကျ်ားမြတ်ဥစ္စာ ဖြစ်သည်။
အဘယ်တရားသည် ကောင်းစွာ လေ့ကျင့်သည်ရှိသော် ချမ်းသာကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်နည်း။?
အသင် အာဠာဝက ဤလောက၌ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်အပ်သော ဆယ်ပါးသော (သုစရိုက်) တရား သည်သာလျှင် ချမ်းသာခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အရသာတို့တွင် အဘယ်သို့သော အရသာသည် အချိုမြိန်ဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း။?
အရသာတို့တွင် သစ္စာတရားသည် အချိုမြိန်ဆုံးသော အရသာဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ဤလောက၌ အဘယ်သို့သော အသက်မွေးခြင်းသည် မြတ်သော အသက်မွေးခြင်း ဖြစ်သနည်း။?
ဤလောက၌ ပညာဖြင့် အသက်မွေးခြင်းသည်သာလျှင် မြတ်သော အသက်မွေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤလောက၌ အဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့် ကျော်စောခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသနည်း။?
သစ္စာတရားဖြင့်သာ ကျော်စောခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
အဘယ်အကြောင်းဖြင့် အဆွေခင်ပွန်းတို့အား ဖွဲ့နိုင်ပါသနည်း။?
ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်သော သူသည်သာ အဆွေခင်ပွန်းတို့ကို ဖွဲ့နိုင်ပါသည်။
ဤလောက၌ အဘယ်အကြောင်းဖြင့် တမလွန်လောကသို့ ရောက်ရှိသည်ရှိသော် မစိုးရိမ်ပါသနည်း။?
အကြင် အိမ်ထောင်မှုကို ရှာမှီးလေ့ရှိသော ယုံကြည်မှုရှိသူအား မှန်ကန်မှုဟူသော သစ္စာ၊ ပညာဟူသော ဓမ္မ၊ အားထုတ်မှုဟူသော ဝီရိယ၊ စွန့်ကြဲမှုတည်းဟူသော စာဂ၊ ဤတရား လေးပါးရှိသော သူသည်သာလျှင် တမလွန်ဘဝသို့ ရောက်သည်ရှိသော် မစိုးရိမ်ရချေ။
အာဠာဝကဘီလူးသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ဖြေဆိုတော်မူခြင်းအပေါ် ကျေနပ်အားရခြင်းနှင့်အတူ ကြည်နူးပီတိပါ ဖြစ်ရသည်။ ထို့နောက် အာဠာဝကသည် သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုပြီးနောက် ဘုရားရှင်အား ကြည်ညိုမြတ်နိုးစွာဖြင့် လက်အုပ်ချီကန်တော့လိုက်လေတော့သတည်း။
Credit : မူကြိုဆရာ